रेखा थापाको चुनावी ग्ल्यामर :: a1nepal.com.np
'म मेयरमा उठिनँ तर आगामी संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेछु'
प्रभाकर गौतम नेपाल खवरबाट
चुनावका लागि उम्मेदवारी दिने पात्रको मात्रै चर्चा चल्दैन। मत माग्दै हिँड्ने पात्रहरु पनि चर्चामा आउँछन्। अभिनेत्री रेखा थापा यस्तो चर्चामा सबैभन्दा अगाडि छिन्। किनकी रेखा र चर्चा एकअर्काका पर्यायजस्तै हुन्। दुई हप्ता यता उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पक्षमा भोट माग्दै घरदैलो धाइरहेकी छन्।
दुई चरणमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा उनको दौडधुप तीव्र बनेको हो। यसक्रममा उनी मकवानपुर, हेटौडा, चितवनलगायतका गाउँ ठाउँ घुमिसकेकी छन्।
आफ्नो मिडिया मैत्री अन्दाजमा हाँस्दै सुनाइन्, ‘निर्वाचन यस्तरी लाग्यो कि फिल्मको काम नै पछाडि धकेलेर पनि गाई चिन्हमा भोट माग्दै हिडेको छु।’ कला यात्राबाट राजनीतिक यात्रामा होमिएकी रेखाले फिल्मभन्दा राजनीति प्राथमिकतामा पर्न थालेको नकारिनन्। पूर्वतयारी अनुसार रुद्रप्रियाको छायाङ्कन पर धकेलेरै उनी चुनावी प्रचार प्रसारमा लागेकोले पनि यो पुष्टि गर्छ। बैसाख ३१ मा पहिलो चरण र जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन भएकोले प्रचार प्रसारमा रेखाको दौडधुप केही समय अझै जारी रहनेछ।
झन्डै २० वर्ष लामो स्थानीय जनप्रतिनिधिको रिक्ततालाई संघारमै आइपुगेको स्थानीय चुनावले पुर्दैछ। त्यही भएर रेखा चाहन्छिन्, ‘यो चुनावले सिंहदरबारलाई हरेकको गाउँटोलमै पुर्याउने भएकोले सबैले विवेक प्रयोग गरी अनिवार्य रुपमा मत हाल्नु जरुरी छ।’ रेखा आफैं पनि क्षेत्र नम्बर चारबाट भोट हाल्नु आतुर छिन्।
आफूले फिल्ममा निर्वाह गरेका दुर्गा, काली वा हिम्मतवाली जस्ता भूमिकालाई महिला सशक्तीकरण र विद्रोही चरित्रका रुपमा अथ्र्याउने रेखाले राजनीतिलाई भर्खरै आत्मसात गरेकी हैनन्। त्यसैले भोट माग्दै हिँड्नुलाई नौलो काम मान्दिनन्। भन्छिन्, ‘म पहिला फिल्म हेर्दिनुस् है भन्थेँ, अहिले भोट चै गाईलाई है भन्दै हिँडेको छु। एकदमै रमाइलो भइरहेको छ।’
राप्रपाको चुनावी कार्यक्रममा रेखा थापा
पहिलो फिल्म ‘हिरो खेल्दा उनी १६ वर्षकी थिइन्। समयक्रममा उनले अभिनेत्रीबाट निर्मात्री र निर्देशककै अभिभारा समेत बोकेर नेपाली फिल्म क्षेत्रमा ‘हिरो’ छवि निर्माण गरिन्। रेखा फिल्म्स् ब्यानरबाट औषतमा वर्षको एउटा फिल्म बनाउने उनको प्रतिबद्धता छँदैछ। एउटै भूमिकामा खुम्चेर बस्न नचाहने उनको स्वभाव हो। त्यसैले फिल्मसँगै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न भनी आफ्नै नाममा उनले ‘रेखा फाउन्डेसन’ खोलेकी छन्। यसरी हेर्दा रेखाको रेखाको प्रगतिको ग्राफ निरन्तर उकालोउन्मुख छ। उनकै भनाइमा, ‘समाजसेवा एउटा परिधिभित्र हुन्छ, राजनीतिले त्यो दायरा फराकिलो बनाउन चाहेकी हुँ।’
प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउनुमा आफ्नो प्रशसंकको प्रोत्साहन नै कारक रहेको बताउने उनले गत मंसिर २७ मा औपचारिक रुपमा पार्टी प्रवेश गरेकी हुन्। फागुनसम्म आइपुग्दा उनी महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यका रुपमै चुनिइन्। त्यसबेला उनले भनेकी थिइन्, ‘मेरो राजनीतिक यात्रा लामो छ। यो त्यसको सुरुवात हो।’
फिल्म होस् वा राजनीति सधैं अग्रभागमा देखिन चाहने, नेतृत्व लिन तम्सिने रेखालाई स्थानीय चुनावमा राप्रपाले काठमाडौं उपमहानगरको उपमेयरमा प्रस्ताव गरेको चर्चा चल्यो। यसबारेमा फिल्मी शैलीमै जवाफ दिँदै बोलिन्, ‘हेर्नुस् चर्चा योग्य मान्छेकै हुन्छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएकी छु।’
रेखा चर्चाकी पर्यायजस्तै बनिसके पनि चर्चा सधैं सकारात्मक हुँदैन। नकारात्मक चर्चा पनि हुन्छ। झन् फिल्म क्षेत्रमा भन्दा राजनीतिमा हुने आलोचना खरो हुने नै भयो। यस्तै आलोचना उनले राप्रपा प्रवेश गरेकै दिनदेखि अद्यापि जारी छ।
‘पहिला माओवादीमा अहिले राप्रपामा।’ वा ‘रेखाले धर्म र राष्ट्रवादको आडमा राजनीति गर्ने भइन्’ जस्ता आलोचना उनको कानसम्म पनि पुग्यो। र नै त पटक पटक उनले स्पष्टिकरण दिइरहिन्, ‘तपाईंहरुमा यस्तोखाले सोच या भ्रम केही होला, रेखा माओवादीको सदस्य हो। एउटा सफल कलाकार भएकाले एउटा पार्टीले स्वीकार्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले होला, मलाई चुनावको टिकट पनि दिइएको थियो। तर म कहिल्यै त्यो पार्टीको सदस्य भइनँ।’ अर्को स्पष्टीकरण, म सधैं राष्ट्रवादी युवती थिएँ, हिन्दु नारी थिएँ।
चुनाबी भाषण गर्दै रेखा थापा
आफू सक्रिय राजनीतिमा लागे पनि कलाकारका रुपमा आफ्नो साख कायम रहेको रेखाको दाबी छ। आत्मविश्वास उनको ओठमै झुन्ड्यो ‘चुनावका क्रममा जहाँ जहाँ पुगे पहिला झैं माया र सद्भाव पाएकी छु।’
जनताका समस्या बुझेर मात्रै हुँदैन, राजनीतिको मुख्य काम त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो। र रेखालाई लाग्छ यसका लागि नेतृत्व तहमै पुगेर काम गर्नु पर्छ। त्यही भएर यस पटकको चुनावमा उठ्ने चर्चा चर्चामै सीमित हुनुलाई पनि सकारात्मक मान्ने रेखा सधै प्रचार प्रसारमा सीमित हुन चाहन्निन्। खुलेरै भनिन्, ‘जनताबाट चुनिएर सक्रिय राजनीति गर्ने कुरामा प्रष्ट छु।’
धार्मिक कार्यमा रेखा थापा
राजनीतिक रुपमा सधैं ‘हिरो’ भइराख्ने चाहना राख्ने रेखा जेठ ५ मा सार्वजनिक हुने ‘डायरी’मा ‘भिलेन’का रुपमा देखिँदै छिन्। फिल्ममा ‘हिरो’ वा ‘भिलेन’ जे बने पनि रेखा आफ्नो आफ्नो ग्लामर कायम राख्न सफल छिन्। तर कला झैं राजनीतिमा रेखाको ग्लामरको आयु कति होला, उनी आफैं जाँच्न चाहन्छिन्। उनमा आफूप्रति शंका छैन रे!
बोल्ड अन्दाजमा भनिन्, ‘मलाई त विश्वास छ। तर जनताबाट अनुमोदन पाउनै पर्‍यो। त्यही भएर आगामी संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेछु।’
(तस्विरहरू: रेखा थापाको ट्वीटरबाट)
कता गए नेपाली डुप्लिकेट ? नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)मा नेपाल सुन्दरी पोर्न फिल्ममा फर्कन चाहदिनन् बलिउड अभिनेतृ सन्नी लियोन पंगेनीको स्वरमा धरधरी रोए दर्शकहरु, रुदा रुदै नाचे पनि इजरायलवासी पोखरेली गीतकार कुमार पौडेलको ‘मायाको फूल’ सार्वजनिक हुदै सार्वजनिक भयो विन्ध्यवासिनी अवार्डको मनोनयन
← वृद्धभत्ता लिन वृद्धवृद्धालाई सास्ती	यी हुन् ट्रम्पकी श्रीमती मेलियाना, जसको नग्‍न फोटो अहिले चर्चामा छ →